यी ४ राशिका लागि आगामी १५ दिन धेरै भारी, आउनेछन् यस्ता कठिनाइ
January 13, 2022 N88LeaveaComment on यी ४ राशिका लागि आगामी १५ दिन धेरै भारी, आउनेछन् यस्ता कठिनाइ
ज्याेतिषशास्त्र अनुसार आगामी १५ दिनमा ग्रहहरूको स्थितिमा पनि ठूलो परिवर्तन हुन लागेको छ । यी परिवर्तनहरूले सबै राशिका चिन्हहरूको जीवनलाई असर गर्नेछ, तर4राशि चिन्हहरूको जीवनमा धेरै कठिनाइहरू ल्याउन सक्छ। आगामी १५ दिनमा सूर्य, शनि, बुध, मंगल, शुक्र आदि ग्रहको राजाको स्थितिमा ठूलो परिवर्तन हुँदैछ । सूर्य शनिको मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ भने मंगल […]
यो मन्त्र सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ, जसले दिन्छ प्रगति-धन-स्वास्थ्य सहित सबै चीज
January 13, 2022 N88LeaveaComment on यो मन्त्र सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ, जसले दिन्छ प्रगति-धन-स्वास्थ्य सहित सबै चीज
काठमाडाैं । मन्त्रहरूमा धेरै शक्ति हुन्छ, त्यसैले भगवानको पूजाको लागि मन्त्र जपलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइन्छ। प्रत्येक देवताका लागि फरक-फरक मन्त्रहरू छन्, जसको जपले ती देवताहरूलाई प्रसन्न र आशीर्वाद दिन्छ। यी मन्त्रहरूले जीवनमा सुख, समृद्धि र सफलता ल्याउँछ। सबै प्रकारका दु:ख र कष्टहरू हटाउँछ। यी केही मन्त्रहरू विशेष रूपमा शक्तिशाली छन्। जसमध्ये गायत्री मन्त्रलाई सबैभन्दा […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस ३० गते शुक्रबारकाे राशिफल !
January 13, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माईकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस ३० गते शुक्रबारकाे राशिफल !
तपाईका लागि शुक्रबार कस्तो रहनेछ। हेर्नुस वि.सं. २०७८ साल पुस ३० गतेकाे राशिफल मेष: शुक्रबार जीवनमा सुनौलो पल ल्याउने छ। बुद्धिमताले गरेका काम पुरा हुनेछन् । आफ्नो व्यापार बढाउन घरका सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गर्नुहुनेछ। सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा काम गर्नेहरूका लागि दिन राम्रो छ। वृष: केही बानीमा सुधार गर्नाले तपाईको दिन राम्रो हुनेछ। पुरानो लगानीबाट प्राप्त धनले […]
खाता खोल्न हिँडेकी वृद्धाको बाटोमै मृत्यु
January 13, 2022 N88LeaveaComment on खाता खोल्न हिँडेकी वृद्धाको बाटोमै मृत्यु
कालीकोट । बैंक खाता खोल्न हिँडेकी ६० बर्षीया वृद्धाको बीच बाटो मै मृत्यु भएको छ । कालीकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिका–३ पनेराकी टिउकी बमको बैंक जाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । पालिकाले बैंक खाता नभइ वृद्धभत्ता नदिने भनेपछि उनी खाता खोल्न करिब १० किलोमिटर टाढाको थिर्पु जाँदै थिइन् । सोही क्रममा वृद्धाको ज्यान गएको हो […]
लकडाउन बारे स्वास्थ्यमन्त्री के भन्छन् ?
January 13, 2022 N88LeaveaComment on लकडाउन बारे स्वास्थ्यमन्त्री के भन्छन् ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बिहीवार कीर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरुको कुरा सुनेर लकडाउन गरेपनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताएका हुन् । उनले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब […]
हातमा रहेको यी ३ रेखाको त्रिकोणले बताउँछ तपाईँकाे धन सम्पती ! यसरी आफै हेर्नुस् हात
January 13, 2022 N88LeaveaComment on हातमा रहेको यी ३ रेखाको त्रिकोणले बताउँछ तपाईँकाे धन सम्पती ! यसरी आफै हेर्नुस् हात
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रका विभिन्न विधामा राशिफल, अंकविज्ञान, मस्तिस्करेखा र हस्तरेखाको ज्ञानलाई मुख्य मानिन्छ। यसमा हस्तरेखा शास्त्रको साथसाथै औंलामा बनेको पाेराको आधारमा भविष्यको ज्ञान लिनु पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । अर्कोतर्फ, हातका रेखाहरूले तपाइँको विगतसँग सम्बन्धित सत्य मात्र प्रकट गर्दैन, तपाइँको भविष्यसँग सम्बन्धित धेरै घटनाहरू प्रकट गर्न पनि सक्षम मानिन्छ। यस सम्बन्धमा हस्तरेखा विज्ञ वीडी […]
भाेलिदेखि लगातार ३ दिन सार्वजनिक बिदा
January 13, 2022 N88LeaveaComment on भाेलिदेखि लगातार ३ दिन सार्वजनिक बिदा
कन्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका थारु समुदायले माघी पर्वका अवसरमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेर नगर प्रमुखलगायतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आदिवासी जनजाति सङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध पदाधिकारीले यही पुस ३०, आगामी माघ १ र २ गते बिदा दिन माग […]
क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको प्रतिवेदन नै गायब पार्ने माओवादीका नेताको सम्पत्ति छानबिन होला?
January 13, 2022 N88LeaveaComment on क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणको प्रतिवेदन नै गायब पार्ने माओवादीका नेताको सम्पत्ति छानबिन होला?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘नेताहरू भ्रष्ट, विलासी भएको र सच्चिनुपर्ने’ विषय पारित भयो। प्रतिवेदनका रुपमा आएको उक्त विषय पारित भएसँगै के अब माओवादीका नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होला र छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ला त? स्वयम् प्रचण्डकै पनि सम्पत्तिको विषयमा कुरा उठेको थियो। तर, उनले […]
एमाले युवा नेताको लहर,तीन लियरमा नेतृत्व स्थापीत हुने
January 13, 2022 N88LeaveaComment on एमाले युवा नेताको लहर,तीन लियरमा नेतृत्व स्थापीत हुने
काठमाडाैं । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन महासचिव तथा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अब एमालेमा तीन लियरको नेतृत्व स्थापित हुने बताएका थिए । उमेर समूहका आधारमा उनले आफूहरूसहितको पहिलो पुस्ता, ४० वर्षमाथिका दोस्रो पुस्ता र भर्खरै युवा विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढेको तेस्रो पुस्तालाई मिलाएर सबै तहको नेतृत्व अघि बढाउने पोखरेलको धारणा थियो […]
धोकेवाजलाई अवसर नै अवसर – यसरी उदाङ्गियाे प्रचण्डका ढाँटछलका करतुत …. !
January 13, 2022 N88LeaveaComment on धोकेवाजलाई अवसर नै अवसर – यसरी उदाङ्गियाे प्रचण्डका ढाँटछलका करतुत …. !
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जगत पार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्कीको उम्मेदवारीले माओवादीमा अर्कै बहस पनि सिर्जना गरेको छ । कुरा २०७४ साल मंसिरको हो । त्यतिबेला पहिलो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भइरहेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले निर्वाचन लड्दै थियो । […]